Kedụ ka anyị ga - esi merie agha ụwa nke atọ? Azịza ya nwere ike ịdịrị gị. - 1aviagem.com
Gara aga post: South Africa Ajụjụ ọnụ a South Africa. E nwekwara mgbanwe a na-atụghị anya ya n’etiti ajụjụ ọnụ ahụ
Nkwupụta ozo: Ihe ị ga - eme na Gaborone - Botswana
Edebere 10 January 2020 site Römulo Lucena
Ọ dị mma, na ọgụ a niile dị n'etiti US na Iran nke kpatarala ọnwụ ụfọdụ, ọ dịkwa nwute na enwere ike ịnwụ ọnwụ karịa… Anọ m na-eche ma na-eche etu mmadụ ga - esi merie agha ụwa wee belata ndị ahụ metụtara ntakịrị ihe enwere ike?
Etu esi merie agha ụwa nke atọ?
Na-eche maka ya, abịara m na-ekpebi na ụzọ kachasị mma iji merie agha bụ njem n'etiti ndị na-amaghị ibe anyị. Enwere m ahụmahụ siri ike na njem ikpeazụ a na South Africa, nke m ga-ewetara gị ọkwa a. Ọ bụ ihe na-enye afọ ojuju. Ọ bụ ihe na-atọ ọchị mgbe ị na-agwakọta ọtụtụ ndị njem, nke ọ bụla site na mba dị iche na obere ala! Ma ọ bụ karịa nke ka mma, nke ọ bụla si na kọntinent ọzọ! Ee, n'ime otu a enwere m ike ịsị na anyị nwere ndị nnọchiteanya sitere na kọntinent ise. Europe, Eshia, America, Oceania na Africa. Ma mgbe obere oge na-egbu oge, onye ndu anyị enweelarị ihe ịtụ anyị n'anya na ahịrịokwu a: “Lee njegharị anyị, anyị enweghị ihe ndị dịka: oge ​​a kapịrị ọnụ”. Zuo ike 😎. Na mbido njem ahụ, ọ bụ ngwakọta nke mkpali na amaghị ... gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ị gwakọtara ndị dị iche iche ụdị otu ebe? Onye ọ bụla nwere omenala, ọdịnala ya, ụzọ ọ ga - esi…
Bo-Kaap (nke pụtara "dị na Cape" na Zulu)
A hụlarị ụdị ọdịiche a na Bo-Kaap, obodo kachasị ochie na peninshula South Africa, nke dị n'akụkụ ugwu nke alrịba Ama, ị ga-ahụ ụdị di iche iche na-egosipụta onwe ya n'ụdị agba. N'ebe a n'oge gara aga, enwere ndị ohu ma machibidoro ha ịcha ụlọ ha. Naanị na ike ndị mgbe ochie achọghị ka ha nwee njirimara ọ bụla, ka emechara, ndị ohu "bụ naanị ohu". Ma, mgbe ha merisịrị nnwere onwe ma nweta njirimara nke ụmụ amaala, ha kpebiri ịrecha ụlọ ahụ na agba dị iche iche na agba ọ bụla na-anọchi anya nnwere onwe nke ezinụlọ. Kwube nnwere onwe ikwu okwu! (Otu ihe ahụ na-emetụta ụwa dum) Ma na-adọrọ mmasị karị bụ ịmara na ọ bụ ndị Alakụba bidoro 'ọdịnala obodo' ma ndị agbata obi sonyeere. Ọ bụ ihe dị mma na ha sonyere na mpaghara, ọ dị ezigbo nju oyi. Mgbe mkpokọ na-eme ihe, nnwere onwe na-abịa ma onye ọ bụla merie. Nke a bụ ebe mmekorita dị n'etiti ndị njem na-amalite ime. Ask na-arịọ maka enyemaka na otu foto, enyemaka ọzọ na n'oge na-adịghị anya, ndị otu ahụ alaghachila na obere obere na-agwakọta ọdịiche ha.
Ma dịka ị chọpụtara na vidiyo dị n’elu, ọ dabara nke ọma na ndị mmadụ nwere nnukwu ike ma n’oge na-adịghị anya anyị nwetara ndị enyi ọhụrụ. Ọbụghị naanị n’etiti ụmụ mmadụ, kamakwa na ụmụ obere ndị ọzọ.
Nke ahụ buru ibu nke ukwuu.
Nnukwu nnukwu ego.
Ọ bụrụ n ’anya lere anya na foto a dị n’elu, ị ga-ahụ ihe ụfọdụ yiri nzukọ ndị omeiwu, onye ọ bụla nke nwere akwa na uwe elu ha nwere ike ikwu gbasara udo ụwa, ma ọ bụ mgbe nri ga-esote. Anyị agaghị ama! Mana anyị na-echeta nkwenye nke onye ndu anyị ma soro ụmụ ụdị anyị ọzọ na-emekọrịta ihe. Ọ kachasị mma ịhapụ ha naanị n'ụlọ nsọ ha na nzukọ ndị omeiwu ha. Mgbe ha kpebikwasịrị ihe ọ bụla ha kwekọrịtara na ya, ụfọdụ bidoro na-agbara onwe ha ọsọ. Ikekwe ha ga-achọkwu nzuzo. Ọbụlagodi na oge mmetụta ịhụnanya chọrọ nzuzo.
Ya mere anyị hapụrụ penguin nọ n’ókèala ha wee gawa njem anyị.
Cape nke Ezigbo Olile Anya.
N’ikpeazu anyi abatara n’olulu odi olile anya, nke a na-akpokwa “cape of oké ifufe”. Ebe ndị na-akwọ ụgbọ mmiri na-enye ihe ọjọọ mebiri emebi n'ihi ike nke ebili mmiri na ifufe. Iji nweta echiche, ọ bụ ebe jikọtara ike nke oke osimiri abụọ, ndị India na Atlantic. Ọ bụ ya mere na ọ bụghị na mberede ka a na-akpọ ya: "O cabo das Tormentas" aha Luis Luis de Camões nyere na "Os Lusíadas". Ebe ndị ọkwọ ụgbọ mmiri duhiere anụ ọjọọ Adamastor ka ọ pụọ site na Osimiri Atlantic gaa Indian Ocean. Ka ọ dị ugbu a, naanị “anụ” ndị fọdụrụ adị bụ adaka. Anụ ndị a na-ezukarị ndị ọbịa. Okwesiri irube isi ihe iriba ama ma ghara inye umu anumanu nri. Ugbu a ọ dịkwa mkpa ịghara igosi ụjọ, ma ọ bụrụ gosi gosi na ọ ga - esochi gị. N’ezie, ọ bụghị naanị na ndị enyi anyị atụghị egwu, ha mere enyi.
Mgbe ahụ ịlụ agha na-amalite ịgafe oke mmiri! N'ebe a, anyị ga-achọ ike nke ọbụbụenyi na ntakịrị ije iji gafere Cape nke Ezi Nchekwube. Anyị nwere ụzọ ụkwụ nke dị naanị kilomita 1.5, mana n'ihi nkwụsịtụ ndị a chọrọ iji nwee ọ enjoyụ ebe ahụ, ikuku siri ike, na ụzọ na-adịghị agafe agafe, ịgafe nwere ike iwe ogologo oge.
Lee enyemaka niile na-anabata! Ọ bụ ọmarịcha mara mma nke nwere ọdịdị dị egwu.
Na foto a (na ọtụtụ ndị ọzọ) Enwetara m enyemaka nke otu ezigbo mmadụ na njegharị anyị. Zute Noreen. Ọ bụ onye na-agwakọta obiọma, obiọma na agụmakwụkwọ n'ụzọ kacha mma. Site na ezigbo ụkpụrụ ya siri ike ọ nwere ike ịbụ Queen nke England!
Noreen na-akụziri anyị na ọ bụrụ na ị gaa njem, naanị ịda mba agaghị egbochi gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere enyi ịnyere aka na ihe. Ọ na - akụzikwara anyị na anyị kwesịrị ịkekọrịta ihe ndị anyị rụzuru, ekwentị na batrị, antiseptics na ọbụna Uber!
Maka ndị na-ahọrọ n'akụkụ osimiri, ma achọghịkwa ịma ma ọ bụrụ na nke ugbu a siri ike, anyị nwere ụzọ mkpirisi, chọpụta ma kọwapụta site na enyi anyị. Selçuk.
Selçuk bụkwa ezigbo onye na-ese foto ma nwee mmasị na elu ugwu.
Ma zute onye nnọchi anya Oceania anyị, Sarah. Ọ dịghị atụ egwu nke oké osimiri ma gosi anyị na obere jụụ na introtion enweghị mmerụ ahụ. Site n'ụzọ, ọ bụ ezigbo ihe ịme ebe a dị egwu.
Ọ kụzikwaara anyị na anyị kwesịrị ịdị njikere mgbe niile iji were Uber, ọbụlagodi n'ebe a na-ahụkarị na njedebe nke Africa! Ebe ọ bụ na anyị na-ewebata ndị ọrụ anyị ... zute Jeremy na Hannah. Ha gosipụtara anyị akụkụ ka ukwuu na-akpali akpali ma na-atụghị egwu ịchọpụta ihe ndị ọhụrụ. Ha gosikwara mkpa ọ dị ka ọbụbụenyi na-enwe ebe ọ bụla ha na-aga.
Mara Majeed, ọ kuziri anyị na inwere obere ndidi dị mkpa iji jigide njem dị mma. Prova Na-egosikwa na n’agbanyeghi ụzọ pụrụ iche nke ịdị, ọ ga - ekwe omume inwe ezigbo obi ma nyere ndị ọzọ aka. Ọ bụghị ego na-achịkwa ụwa, kama ọ bụ ndị mere ya. Ọ bụrụ na ndị mmadụ dị mma, ụwa ga-adị mma. Ọ bụrụ na ndị mmadụ adịghị mma ... anyị nwere ike nwee agha ụwa nke atọ. Biko di nma!
Anyị nwekwara Fem, ọ tozuru oke n'ịchọta ebe kacha mma ịse foto. Na mgbakwunye, o na-egosi oke obi mgbe ọ na-ekerịta anyị vidiyo ya na ebe ọhụụ ịga.
Fem anaghị atụ egwu ihe dị elu ma na-egosi anyị na ezigbo ọbụbụenyi bụ nke na-etinye onwe ya n'ihe ize ndụ maka ndị ọzọ! Ekele dịrị ya na anyị nwere onyonyo nke di na nwunye kachasị nwee ọfụma na Njem nleta anyị na Betty. Ọ bụrụ n’inwere nwunye na-enwe mmasị n’ebe ọ nọ, ọ bụ gị! Ha gosiri anyị na ezi ịhụnanya enweghị ike ihichapụ oge ma ọ bụ nsogbu. Nke ahụ bụ na ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ, anyị ga na-arụ ọrụ na ihe anyị na-amasị, na anyị agaghịkwa na-arụ ọrụ. Emebere ndụ dịka nhọrọ, ụfọdụ siri ike, mana mkpebi nke otu ka onye ọzọ kwadoro. Ha na-egosipụtakwa na afọ agadi na-anọchi anya nchikota nke ahụmịhe ndị ọzọ ha nwetara (+ afọ 70). Nke ahụ abughikwa ihe ngọpụ maka ịgaghị eme njem. Ha dikwa n’udi, ha agwụchaala ụzọ n’ihu anyị! Di na nwunye ndi n’eme njem, biri n’otu!
Ewoo, olee otu m ga-esi echezọ onye ndu anyị! O nwere ike anwansi! Ọ na-ejikwa aka kwụsị oge na -aga n'ihu. . (Ọ bụ ya mere na anyị enweghị ihe ndị a na njem a dị ka oge atọrọ!) Aha ya bụ Pedro, mana ebe a bụ maka anyị… Echere m na ọ bụ naanị aha otutu. Ekwesịrị ịkpọ ya Chronos! (Chineke nke oge). Ọ na-eburu mmụọ South South n'ezie n'ime ya. Njem a ya na ha mere dị ezigbo mma. Site na akụkọ ha, nri ehihie na “ọfịs” ha, anyị na-emekwa ị sharingụ achịcha.
N'agbanyeghị na-achịkwa oge ahụ, Pedro enweghị ike ịchịkwa ụmụ ya (anyị) na mberede na ọ bụ chi na-efu! (Kechioma & furu efu). Lee ihu ya na-achọ ka anyị na foto a dị n’elu! Na iji mee mmemme njikọ nke kọntinent a, mba ndị a dịgasị iche iche, na-ejedebe iji mejupụta mmanya pụrụ iche na gị. Ọ dịghị ihe dị mma karịa mmanya ịtọ ụtọ! Ọzọ na onyonyo si Fem.
Na tupu m gwụchaa, ọ dịkwa m mkpa ikwu banyere onye Brazil bụ onye nnọchite South America. Ee, onye mụtara ọtụtụ ihe n’aka mmadụ niile. Ma lee ka ọ ga esi sie ike ikwu banyere ihe m nwere ike ịkụziri. Enwere m ike ikwu maka ihe m mụtara. Rômulo bụ onye Brazil ma ọ daghị mba. Ọ bụ ezie na ọ na-agabiga nso na nke ahụ. Amụtara m na ọ joyụ bụ ihe na-esi n’ime apụta.
Amụtakwara m na ịgafe oke mmiri chọrọ ezigbo ọbụbụenyi. N'ebe ọ bụla ị nọ, ọbụlagodi ndị si na Brazil, ma ọ bụ ndị enyi mere n'oge njem ahụ. Nke ahụ ọbụlagodi na ị nọ na njedebe nke ụwa bụ ndị enyi bịara inyere gị aka.
Ya mere, n’ime anyị ka ìhè na onyinyo dị, ọ dị anyị n’aka ikpebi ihe ga-apụta ma bụrụ akụkụ nke ụwa.
Amụtakwara m na ezigbo ihe egwuregwu bụ oge dị mma iji hapụ akụkụ gị gbara ọchịchịrị. Ehe ma ọ bụrụ… Ọkachasịchaa mmanya dị ụtọ! Na iji wee merie agha, otu ihe dị mkpa ịhapụ njem dị egwu. Ọ dị mkpa ịge ntị n'echiche dị iche iche, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ijikọ ha niile n'ụzọ. Ikwesiri inye aka iji merie. O di nkpa ka enyere aka nyere gi aka. Na mmeri nke onye obula n’ime anyi bu mmezu nke anyi niile! Ndidi, nnọgidesi ike, ike na mkpebi siri ike, na inwe okwukwe na nrọ gị mere ka ha kwe omume, ị ga-ejidesi aka gị ike.
Na na enwere ndị ezigbo mmadụ n'ụwa niile, naanị ihe ị ga - eme bụ ịchọpụta ndị ha bụ ma nọrọ ha nso.
Na nkenke, nke a bụ otu anyị nwere ike isi merie agha ụwa ọ bụla. Ibepu ndiiche, ime ndi mmadu di iche iche, ime ndi enyi ohuru, kwanyere nkwenkwe ha na echiche ha. Ikwesiri inwe okwukwe, nwee ume. Na ikekwe nzukọ ndị omeiwu dịka nke penguin. Mana ike ọbụbụenyi bụ ike n’eme ka anyị dị mma karịa n’otu n’otu. Inwe udo n’etiti onye agbata obi gi nwere ike ịbụ ihe mbu iji nweta udo ụwa. Ọ bụ ya mere na blọọgụ a na ndụ, a na-anabata ndị Argentine, ndị Colombia, ndị Venezuelan, Chileans, Uruguayans, Paraguayans na obodo ndị ọzọ na South America. Ọ bụrụ n’ịchọrọ post a, dịka ya, kerịta ya, kwuo ya (n’okpuru) ma soro anyị na bọtịnụ na-acha ọbara ọbara dị n’akụkụ, naanị ozi-e na ị gaghị agha ọzọ ederede. -> Ime nke a ga - enyere anyị aka na mgbasa ma ọ gaghị efu gị ihe ọ bụla. Anyị a ga-eru ụwa?
akụkọ ihe mere eme Nke atọ agha ụwa Enyi South Africa Bo-kaap Cape nke Ezigbo Olile Anya Oké Ifufe Cape USA Iran njem mbụ